Kacha mma. Mbipụta ndị nchụ nta akụkọ. Mgbe. | Martech Zone
Anyị na-enweta mkpokọta mbipụta akụkọ na igbe mbata anyị kwa ụbọchị ma ana m eche na a na-ehichapụ 99% n'ime ha n'otu nlele. Nke a apụtaghị na ha abaghị uru… anyị na-ele anya maka ozi ọma dị mkpa nke ga - emetụta gị ndị be anyị. Uru nke mbipụta akụkọ bụ nkesa na-arụ ọrụ nke ọma… ọghọm bụ na a na-edekarị ha edeghị nke ọma na mgbakwunye - emezighị emezi ezubere iche.
Mgbe anyị jụrụ Dittoe PR, anyị Mmekọrịta ọhaneze ndị mmekọ, iji bipụta mwepụta na ngwa iPhone anyị, ha laghachiri na a mkpanaka pịa pịa nke ahụ dị oke egwu ịghara ịkekọrịta. Enwere m olile anya na ị ga-enwe ọ itụ dịka anyị mere… anyị enwetala nnukwu nzaghachi!
Martech Zone Na-ebupụta ngwa ngwa ngwa-enweghị ngwa ngwa
INDIANAPOLIS–N'etiti 775,000 "mgbanwe," "mbelata" na ngwa ọdịnala ngwa ọdịnala na-ejikwa Apple's App Store, Martech Zone na-ewere a obi ike nzọụkwụ taa site launching ya ọhụrụ mobile ngwa na-enweghị oké ojiji nke buzzwords ma ọ bụ hyperbole.
Otu isi iyi nke online maka ahia technology ozi ọma, ngwaahịa reviews, ọrụ na omume kacha mma na-họọrọ a “Top Marketing Blog” site Ike Age Age Mgbasa 150, Martech Zone na-eme ka ọnọdụ ya na akụkọ ntolite bụrụ naanị ngwa iOS iji bido na-enweghị ebumnuche ọ bụla maka ịgbanwere teknụzụ ekwentị ma ọ bụ ịmebata "onye na-agbanwe egwuregwu" na ụlọ ọrụ ahịa.
Martech Zone ngwa na-enye ohere ka ndị ọrụ gụọ, kesaa ma chekwaa ozi ọhụụ, ntuziaka, infographics na etu esi aga ahịa ahịa n'ịntanetị, ịbata ahịa inbound, ahịa ọdịnaya, azụmaahịa njikwa ngwa ahịa, azụmaahịa ekwentị, mgbasa ozi mgbasa ozi na ndị ọzọ.
N'agbanyeghị nkatọ siri ike sitere na ndị ọrụ ụlọ ọrụ na-arụ ụka na Martech Zone onye nchoputa Douglas Karr kwesiri iji ohere a mee ka ekwuputa ngwa ohuru nke ihe okike dijitalụ, onye ahia ahia na-achoghi adi ya anya.
Naanị ihe anyị chọrọ bụ ime ka ọdịnaya anyị dịịrị ndị na-agụ ya ngwa ngwa, “ka Karr kwuru. “E nwere oge m na-anụ akụkọ gbasara ngwa agagharị. Echere m na anyị ga-echere ruo mgbe HTML5 na ihe nchọgharị mkpanaka nọ ebe a na ngwa ndị ahụ ga-akwụsị ụzọ nke ngwanrọ desktọọpụ. Mana, ha enwebeghị, oge ole ndị mmadụ na-etinye na ngwa mkpanaka na-arịwanye elu.
N'agbata Dec. 2011 na Disemba 2012, nkezi oge eji iji ngwa mkpịsị aka gbagoro pasentị 35 site na nkeji 94 ruo nkeji 127 kwa ụbọchị, ebe nchọgharị Weebụ dara ntakịrị, dị ka otu akụkọ na-adịbeghị anya banyere ọnọdụ US site na ekwentị mkpanaaka nchịkọta ike Flurry.
N'ịbụ onye ohere na-eto eto na-eme ka ndị na-ege ntị nwee mkparịta ụka site na mkpanaka, Karr kpaliri ndị ọkachamara ahụmịhe ọrụ Postano Ekwentị iwu ngwa maka Martech Zone.
Ndị na-ebi na Postano ahapụghị nkume ọ bụla, ka Karr kwuru. Ha wuru ngwa a haziri nke ọma – site na ngwakọta ngwakọ na pọdkastị agbakwunyere.
Iji budata free Martech Zone ngwa, gaa na iTunes App Store.
Tags: dittoe prmmekọrịta ọha na eze dittoeotú dee a pịa ntọhapụAhịa Podcastpostanopostano mkpanaakaprpịapịa nkesambipụta ndị nchụ nta akụkọmmekọrịta ọhaneze
501 writzọ mkpirisi nke Amy Harrison
Feb 16, 2013 na 5:36 PM
Nke a blog post bụ zuru oke ziri ezi na mgbalị ya ịkọwa ngwaahịa nke m kwadoro.
Ngwa a kachasị zuru oke na nhazi ya. Ekwadoro m ya n'enweghi obi abụọ, kamakwa na-enweghị ngwa ngwa ngwa ngwa. Ndị nwere ọdịnaya na saịtị a kwesịrị ibudata ngwungwu ngwanrọ a, mana ha ekwesịghị ịhapụ nhọpụta, leghara ndị enyi ma ọ bụ ezinụlọ anya, mafere nri, ma ọ bụ jụ ọgwụgwọ.
Biko tụlee ibudata ya. Ma ọ bụ, gaa kpọọ n'èzí. Ihe ọ bụla masịrị gị.
Feb 16, 2013 na 7:05 PM
M hụrụ ya n'anya! Marketingre ahịa dị ụtọ nke ukwuu yana ọnọdụ dị ukwuu. Ya mere, olee mgbe a ga-ewepụta ụdị droid? ;-)
Feb 17, 2013 n’elekere 12:20 nke abali
Anyị na-atụ anya n'isi nso!